China igwe anaghị agba nchara cone ala factory na-emepụta | Yuantuo
Structure nke igwe anaghị agba nchara tapered abụọ yinye ala: dị ka ịnya ụgbọ ala mode, ọ nwere ike kere n'ime ike ala akara na-abụghị ike ala akara, dị ka okirikiri nhọrọ ukwuu, ọ nwere ike kere n'ime kwụ erute ala akara, chọrọ erute ala akara na mbịne ala akara. Enwekwara ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị iji mezuo ụdị ndị ahịa niile.
The obosara nke ọkọlọtọ nlele ala bụ 100-2000mm, wdg. Ndị ọzọ pụrụ iche nkọwa nwekwara ike nakweere dị ka ndị ahịa 'chọrọ.
Ọkọlọtọ atụgharị okirikiri nke mbịne ala akara na gbakọọ dị ka usoro, na ndị ọzọ pụrụ iche nkọwa nwere ike nakweere dị ka ndị ahịa chọrọ. Igwe anaghị agba nchara ala usoro:
Ọ adopts carbon nchara na igwe anaghị agba nchara dị ka agba elu nke ala, na nnyefe amị adopts na ike nkenke amị guzobere metal zọ. Ọ nwere uru nke ntụgharị ntụgharị mgbanwe, nnukwu ibu (otu ihe na-agba otu nwere ike iru 20-100kg), ọrụ dị mfe na nrụnye, ọnụahịa ntinye ego dị ala, wdg, enwere ike itinye ya n'ọrụ mmepụta, nkwakọ ngwaahịa na usoro njem nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na ubi.
1. Ala ihe na ọgwụgwọ elu: carbon steel (galvanized, chrome plated), igwe anaghị agba nchara, carbon nchara (ntekwasa / polyurethane, ntekwasa, sprayed), wdg the roller shaft length, irè ogologo nke cylinder ahụ, ọkpọkọ mgbidi ọkpụrụkpụ, wdg nwere ike ịbụ ahaziri dịka ihe onye ọrụ chọrọ si dị;
2. Carbon nchara siri ike mandrel, acha anụnụ anụnụ zinc plating ma ọ bụ ihe mkpuchi chromium, wdg, ma ọ bụ ihe igwe anaghị agba nchara;
3. installationdị echichi e nwere ike họrọ: mmiri pịa ụdị, esịtidem aro ụdị, mpụga eri ụdị, zuru ewepụghị tenon ụdị, site aro gbawara n'etiti pin ụdị;
Obosara: 25, 32, 38, 50, 60, 76
Enwere ike kee mandrel n'ime igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ carbon carbon
Nka na ụzụ chọrọ maka sprocket ala:
1. Nhọrọ nhọrọ nke ala ala: carbon steel galvanized, chrome plated, steel steel, etc. the roller shaft length, irè ogologo nke cylinder ahụ, ọkpọkọ mgbidi ọkpụrụkpụ, wdg nwere ike ahaziri dị ka ndị ahịa chọrọ;
2. A na-eji osisi carbon na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ nchara nchara niile mee ka osisi ahụ sie ike. Enwere ike ịwụnye osisi ahụ n'ụzọ ndị a: ụdị mmiri mmiri n'ụdị, ụdị nha nha eze, ụdị tenon zuru ezu na site na ụdị oghere oghere;
3. Mgbe mgbakọ, ala nwere ike bugharia flexibly enweghị jamming;
4. The ike ala nwere ike chụpụrụ site otu yinye wheel ma ọ bụ abụọ yinye wheel. Ugboro ígwè, eriri igwe, ihe nkedo: 06B / 08B / 10B, wdg.
Nke gara aga: Rubber ntekwasa cone erute ala
Osote: Agbanye conical ebu ala